विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति पक्राउ
काठमाडौँ । धरानस्थिन बीपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई विहिवार साँझ उनकै सरकारी निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार उनलाई ८ लाख घूस सहित रंगेहात पक्राउ गरेको जानकारी दिए । अस्पतालको परिसरभित्रै रहेको निजी निवासबाट घुसको रकमसहित रौनियार प्रक्राउ परेका हुन् । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा कमिशत वापत सेवाग्राहीसँग घुस-रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एंव उजुरीको आधारमा अख्तियारबाट खटिई गएको टोलीले प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र डा. रामहरी रौनियारलाई आठ लाख घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त घुस रकम सहित कार्यालय परिसरस्थित निज उपकुलपतिको निवास, धरानबाट रंगेहात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको छ’, अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
भवन निर्माणसम्वन्धि ठेक्कामा कमिसन माग गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि उनिमाथी अख्तियारले निगरानी राखेको थियो । उपकुलपति रौनियारसहित अर्का डा. रामहरी रौनियारपनि पक्राउ परेका छन् । उपकुलपति रौनियार राजनीतिक हिसाबमा नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । उनलाई गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुदा उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । उनिविरुद्ध कयौं उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । प्रतिष्ठानमा लामोसमयदेखी वेथिति र भ्रष्टचारको दलदलमा फसेको प्रष्ठिानका विषयमा दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ।